यी सांसदका छोरा जस्को जेलमै बसेर निस्किएको थियो लाइसेन्स! – Sandes Post
April 9, 2022 652
विराटनगर विमानस्थल मोडको सडक किनारमा हिडिरहेका उनीहरुलाई पछाडीबाट एक्कासी कारले ठक्कर दियोएको थियो । उपचारको क्रममा ३५ वर्षीय भारतीय नागरिक मुकेश दासको भने मृत्यु भयो । मोरङको कटहरी गाउँपालिका– २ का २७ वर्षीय रामकुमार राजवंशीको अं’गभं’ग भएको छ । उनको बायाँ हातको कुम खु’स्किएका छ भने शरिरको अन्य भागमा पनि ग’म्भिर चो’ट थियो ।
दुर्घटना गराउने कार भने प्रदेश १ कि सांसद बिन्दिया कार्कीको थियो उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदेश १ कि सांसद हुन । दुर्घटनाको दिन प्रदेश सांसदका छोरा रविन सिंह कार्कीले प्रदेश ३–०१–०२२ च २१३९ नम्बरको सो कार चलाए थिए । उनले मा.प.से गरेको घटनास्थल वरपरकाहरुले प्रत्यक्ष देखेका थिए । कारमा ५ जना सवार थिए । गाडीमा रहेका पाँच जना विराटनगरको एड्मायार क्याफेमा थिए। क्याफेमा उनीहरूले १६ वटा बि’यर खाए।
विराटनगर–५ मा रहेको एड्मायर क्याफेमा बि’यर र खाजा खाएर उनीहरु कारमा बाहिर निस्केको प्रहरी अनुसन्धानवाट देखिएको थियो । दुर्घटना पछि फरार रहेका सांसदका छोरा ३ दिन पछि पक्राउ परे । त्यती बेला सम्म उनले मा’प’से गरेको प्रमाण मेटिएको थियो ।
दुर्घटना भएको ३ दिनपछि भने रविन आफैँ आत्मसमर्पण गर्दै प्रहरीकोमा पुगेका थिए । जसका कारण उनले मा’प’से गरे नगरेको पुष्टि गर्ने आधार भएन । तर होटेल सञ्चालक र कारमा सवार व्यक्तिहरूको बयानले भने कार चलाएका कार्कीले मा.प.से गरेको स्वीकारेका थिए।
तर सांसदका छोरालाई उनको कसुर अनुसारको सजायवाट जोगाउन निकै प्रपञ्च गरियो । उनले लाइसेन्स समेत ननिकालेको अनुसन्धानवाट देखिएको थियो । सोही आधारमा मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई मा मुद्दा दर्ता भयो। जिल्ला अदालतले रविन कार्कीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दियो। त्यसपछि भएको बहसमा उनका पक्षका वकिलहरुले टायर प’ड्किएर दुर्घटना भएको पुष्टि गर्न खोजे । यसरी वहस गर्ने वकिलहरु थिए सुरेशलाल श्रेष्ठ, बहादुर थापा र हरिबहादुर श्रेष्ठ ।
तर, जिल्ला अदालतले टायर पड्किएर दुर्घटना भएको दाबी इन्कार गर्दै जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेले रविन कार्कीलाई ३ वर्ष कैद र ३५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाए।
‘तथ्य तथा प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी रविन सिंह कार्कीले मा.प.से गरी तीव्र गतिमा कार चलाएको कारण उक्त कार अनियन्त्रित भई सडक किनारमा हिँडिरहेका मुकेश शर्मा दास र राजकुमार राजवंशीलाई ठ.क्कर दिई दुर्घटना हुँदा त्यही चोट पिरबाट मुकेश शर्मा दासको मृत्यु भएको र अर्का रामकुमार राजवंशीको बायाँ हातको कुम भाँ.चिई अ.ङ्गभ.ङ्ग भएको भन्ने निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुन आएकाले अभियोग मागवादी बमोजिम निज प्रतिवादी रविन सिंह कार्कीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ र सोही ऐनको १६२ को उपदफा १ बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ।
रविनलाई अदालतले न्युनतम सजाय तोकेको थियो । त्यस विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर पुगे । उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कृष्णकमल अधिकारी र जगतनारायण प्रधानको इजलासले टायर प’ड्कि’एर दुर्घटना भएको भन्दै जिल्लाको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याए।
सो ठहर संगै कार्कीलाई ६ महिना १५ दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो। सवारी चलाउँदा कार्कीले मा’प’से नगरेको उच्चको फैसलामा लेखिएको छ। यता अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा सांसद रहेकी कार्कीकी आमाले भने छोराको नाममा नक्कली सवारी लाइसेन्स निकालेको देखिएको छ । बयानका क्रममा कार्कीले मोटरसाइकल र कारको लाइसेन्स यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीबाट लिएको बताएका थिए। तर उनको लाइसेन्स नै थिएन ।
कार्की कि आमा सांसद बिन्दिया कार्कीले जेलमा रहेका छोराको सवारी चालक अनुमति पत्र निकाल्ने प्रबन्ध गरिन्। उनले बाग्मती प्रदेश सङ्घीय राजधानीबाट सवारी चालक अनुमति पत्र निकाल्न सफल भइन् । त्यसपछि कार्कीले पनि वयान बदलेर आफुले बाग्मती प्रदेशवाटै लाइसेन्स दिएको र अहिले त्यसको सक्कली प्रमाण आफुसंग नरहेको विराटनगरमा हराएको भनेर बताए । कार्की जेलमै रहँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाबाट उनको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्र निकालेको देखिएको छ ।
लाइसेन्सको फारम भर्दा शरीर उपस्थिति हुनु पर्ने भएकाले ट्रायलमा फेल भएका अर्कै ब्यक्तिको निवेदन प्रयोग गरेर कार्कीको नाममा लाइसेन्स निकालेको देखिएको हो । यातायात कार्यालयको कम्प्युटर विवरणमा कार्कीको नाममा लिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन फाइलमा भने अर्कैको नाममा छ ।
ट्रायलमा फेल भएएका ब्यक्तिको निवेदन र्आइडी प्रयोग गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र निकाल्न सांसद कार्कीले भुमिका खेलेको देखिएको छ ।
Prevराजधानीबासीलाई दुखको खबर ! कति तिर्नुपर्छ अब ?
Nextभोलि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय